खेलकुद Archives - Online Palanchok
ए डिभिजन लिगः मनाङ मस्र्याङ्दी अपराजित रहँदै लिगको शीर्ष स्थानमा
काठमडौँ । शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा मनाङ मस्र्याङदी क्लव अपराजित रहँदै लिगको शीर्ष स्थानमा उक्लिएको छ । एपीएफ मैदान हलचोकमा शनिबार भएको दोस्रो खेलमा मनाङले सातौ स्थानको सरस्वती युवा क्लबमाथि २–० को जित निकाल्न सफल भयो ।पहिलो हाफ बराबरी खेलेपनि दोश्रो हाफमा भने २ गोल गर्दै मनाङले जित निकालेको हो । पहिलो हाफमा गोल सम्भव नभएपनि ५५ औं मिनेटमा अन्जन विष्टले उत्कृष्ट बल प्रहार गर्दै गोलमा परिणत गरे पछि मनाङले अग्रता लिन सफल भएको थियो । ६८औं मिनेटमा आफिज वलावालेले गोल गर्दै मनाङको अग्रता दोब्बर बनाए । त्यसपछि लगातार सरस्वतीमाथि दबाब बनाए पनि मनाङले थप गोल गर्न सकेन । अन्ततः २–० को जित निकाल्दै मनाङ तालिकाको शीर्ष स्थानमा उक्लन सफल भयो । यसअघि, आजै भएको पहिलो खेलमा संकटा विजयी भएको छ । च्यासल विरुद्ध मैदानमा उत्रिएको संकटाले दुई ÷ एक गोल अन्तरले संकटा विजयी भएको हो । पेनाल्टीमार्फत गोल गर्द
विश्वका चर्चित बलरहरुलाई पछि पार्दै सन्दीप बने सर्वाधिक विकेट लिने बलर
काठमाण्डु, १० मंसिर – नेपालका युवा लेग स्पिनर सन्दीप लामिछानेले दुई विकेट लिएपनि केरला किंग्सले राजपुत्ससँग अंक बाँडेको छ । युएईमा जारी टि–१० क्रिकेट लिगअन्तर्गत आफ्नो तेस्रो खेलमा वर्षा भएपछि केरलाले राजपुतसँग अंक बाँडेको हो । टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको राजपुत्सले नौ ओभरमा पाँच विकेटको क्षतिमा ९५ रन बनाउँदा वर्षा भएको थियो । लौरिई इभान्सले राजपुत्सका लागि ३८ रन बनाएका थिए । बलिङतर्फ नेपालका सन्दीप लामिछानेले दुई विकेट लिन सफल भए । उनले पहिलो ओभरमा नै मोहम्मद शाहजादलाई एक रनमा आउट गराएको थिए । त्यस्तै, आफ्नो दोस्रो तथा अन्तिम ओभरमा कार्लोस ब्राथवाइटलाई पनि एक रनमै आउट गराएका थिए । २ ओभर बलिङ गरेका सन्दीपले २३ रन खर्चेर २ विकेट लिएका थिए । यसअघि केरलाले आफ्नो पहिलो खेलमा पख्तुन्सलाई ८ विकेटले पराजित गर्दा सन्दीपले ३ विकेट लिन सफल भएका थिए । पहिलो खेलमा नै म्यान अफ द म्याच घोषि
सन्दीपले पाकिस्तान सुपर लिग खेल्ने पक्का, कुन टिमबाट खेल्ने भए र कति पारिश्रमिक पाउनेछन् ? (पुरा पढ्नुहोस्)
काठमाडौं, ४ मंसिर । नेपाली क्रिकेटका लेग स्पिनर सन्दीप लामिछानेले फेरी अर्को ठुलो अवसर पाएका छन् । सन्दीपले लाहोर कालान्दर्सबाट पाकिस्तान सुपर लिग खेल्ने अवसर पाएका हुन् । मंगलबार भएको अक्सनमा लाहोरले सन्दीपलाई अनुबन्ध गरेको हो । सन्दीपले न्युनतम ५० हजार डलर पारिश्रमिक पाउने भएका छन् । सन्दीप लामिछानेसँगै लाहोरको टिममा दक्षिण अफ्रिकाका पूर्वकप्तान एबी डि भिलियर्स, फखर जमान, मोहम्मद सफिज, यासिर शाह, कार्लोस ब्राथ्वाइट, कोरी एन्डर्सन, एन्टोन डेभ्किच, रहत अली, शाहिन अफ्रिडी, अघा सलमान, सोहिइल अख्तर, हसन खान रहेका छन् । सन्दीपले इन्डियन प्रिमियर लिग (आईपीएल) क्रिकेटबाट विदेशी लिगमा खेल्न सुरुवात गरेका थिए । त्यसयता सन्दीपले लगातार विदेशी लिग खेलिरहेका छन् । आईपीएलमा दिल्ली डेयरडेभिल्सबाट खेलेका सन्दीपले क्यानेडियन, क्यारिबियन, बिग ब्यास तथा अफगानिस्तानको लिग खेल्न भ्याए । पीएस
ओलम्पिक महिला फुटबलको एशियन छनोटमा अपराजित रहँदै नेपाल दोस्रो स्थानमा पुग्न सफल
काठमाडौँ – ओलम्पिक महिला फुटबलको एशियन छनोटमा अपराजित रहँदै नेपाल दोस्रो स्थानमा पुग्न सफल भएको छ । आज भएको बङ्गलादेशसँगको तेस्रो खेलमा नेपाल र बङ्गलादेशको खेल एक÷एक गोलको बराबरीमा सकिएसँगै नेपाल दोस्रो चरणमा पुगेको हो । समूहको शीर्ष दुई टोली र तेस्रो हुने उत्कृष्ट दुई टोली अर्को चरणमा पुग्ने प्रावधान छ । यसका अनुसार नेपाल समूह विजेता वा उपविजेता नबने पनि उत्कृष्ट दुई घोषित हुँदै दोस्रो चरणमा पुगेको हो । म्यान्माको याङ्गोनस्थित थुनुवा रङ्गशालामा नेपालले १७औँ मिनेटमा कप्तान निरु थापाको गोलमा अग्रता लिएको हो तर दोस्रो हाफको ‘इन्ज्युरी’ समयमा नेपालले गोल खाएपछि लगातार तेस्रो खेल बराबरीमा चित्त बुझाउनुप¥यो । इन्ज्युरी समयको तेस्रो मिनेटमा बङ्गलादेशकी अखी खातुनले बराबरी गोल फर्काएकी थिइन् । सन् २०२० मा हुने टोकियो ओलम्पिक छनौटमा १८ देशको सहभागिता छ । सहभागी टोलीलाई चार समूहमा विभाज
काठमाडौँ – ओलम्पिकको एशियाली महिला फुटबल छनोटको प्रारम्भिक चरणअन्तर्गत आज भएको नेपाल र भारतबीचको खेल १–१ गोलको बराबरीमा टुङ्गिएको छ । म्यानमाको याङगोनस्थित थुवुन्ना रङ्गशालामा भएको समूह ‘सी’ अन्तर्गतको पहिलो खेलमा दुवै टोलीले बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडेका छन् । खेलमा पहिलो अग्रता भने नेपालले लिएको थियो । खेलको ११आँै मिनेटमा नेपाली टोलीकी कप्तान नीरु थापाले गोल गर्दै सुरुवाती अग्रता लिएकी थिइन् । त्यस्तै खेलको पहिलो हाफको ३७औँ मिनेटमा भारतले एक गोल गर्दै खेललाई एक÷एक गोलको बराबरीमा ल्यायो । भारतका लागि कमलादेवी युम्नामले गोल गरिन् । निकै प्रतिस्पर्धात्मक बनेको खेलमा दोस्रो हाफमा भने गोल हुन सकेन । दुवै टोलीले खेलको विभिन्न समयमा पाएको अवसरलाई सदुपयोग गर्न सकेका थिएनन् । यस खेलसँगै नेपाल र भारतले एक÷एक अङ्क जोडेका छन् । भारतविरुद्धको खेलमा नेपालको यो दोस्रो बराबरी हो । यसअघि खेलेको आठ
दर्शकले नै घमण्डी सन्दीप भन्दै सन्दिपकै अघि नारा लगाएपछि सन्दिपले जब उनीहरुकै अघि पुगेर यसो गरे ….!
पोखरा : पोखरामा जारी पोखरा प्रिमियर लिग (पीपीएल) क्रिकेट प्रतियोगिताअन्तर्गत शनिवारको खेलमा रेफ्रीसँग विवाद गरेपछि विराटनगर टाइटन्सका क्याप्टेन सन्दीप लामिछानेलाई कारवाही गरिएको छ। शनिवार चितवन राइनोजसँगको खेलमा गलत निर्णय गरेको भन्दै सन्दीप रेफ्री सञ्जय सिग्देलसँग विवाद गरेका थिए। विवाद गरेपछि म्याच रेफ्री सत्यजित सरकारले कारवाहीसहित डि–मेरिट अंक दिएका थिए। खेलको दोस्रो इनिंगको चौथो ओभरको अन्तिम बल लिएर आएका टाइटन्सका बलर किशोर महतोको बललाई नोबल घोषणा गरेपछि सन्दिपले त्यसको विरोधमा अन्फिल्ड अम्पायर सिग्देलसंग विवाद गरेका थिए। दर्शकले नै घमण्डी सन्दीप भनेपछि : नेपालका लागि र व्यक्तिगत क्रिकेटका लागि एक पछि अर्काे छलाङ मारिरहेका लेग स्पिनर लामिछानेले शनिबारको खेलमा रेफ्रिसँग गरेको विवाद पोखरेली दर्शकले पनि मन पराएनन्। केही बेरअघिसम्म ‘सन्दिप सन्दिप’ भनेर हुटिङ गरिरहेका दर्शकले एक्कासि
६ महिनामै करोडपति खेलाडीको सूचीमा दरिन पुगे नेपाली युवा क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने
काठमाडौं : नेपाली युवा क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने अस्ट्रेलियाको प्रतिष्ठित बिग बास लिग क्रिकेटका लागि अनुबन्धित भएको समाचारले खेल जगत्लाई फेरि तताएको छ। ६ महिनाअघि मात्र इन्डियन प्रिमियर लिग (आईपीएल) खेल्ने पहिलो नेपाली क्रिकेटर बनेका १८ वर्षीय यी लेगस्पिनरको बिग बासमा ‘डेब्यु’को समाचारले नेपाली खेल क्षेत्रलाई तरंगित पारेको हो। आईपीएलमा दिल्ली डेयरडेभिल्सले सन्दीपका लागि २० लाख भारतीय रुपैयाँ खर्चिएको थियो। दिल्लीको अन्तिम तीन खेलमा पाँच विकेट लिएर उनले आफ्नो बलियो प्रभाव छाडेका थिए। त्यसयता सन्दीपले छोटो अवधिमा एकपछि अर्को छलाङ मारिरहेका छन्। उनलाई विश्वका अन्य चर्चित लिगमा अनुबन्ध गर्न विदेशी क्लबहरूको होडबाजी नै चलेको छ। सँगसँगै सन्दीपको आम्दानीले पनि सफलताको सिँढी चढिरहेको छ। नामसँगै दाम पनि कमाइरहेका उनी ६ महिनामै करोडपति नेपाली खेलाडीको सूचीमा दरिन पुगेका छन्। केही महिनाअघि व
नेपाली क्रिकेट प्रेमीहरुको लागी खुसिको खबर : नेपालका चार खेलाडी आइसिसीको बरियतामा , को को परे त ?
काठमाडौँ – अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद् (आइसिसी) को टी–२० क्रिकेटको नयाँ बरियतामा नेपालका चार खेलाडी समावेश भएका छन् । आइसिसीले बुधबार राति सार्वजनिक गरेको नयाँ बरियतामा नेपालका दुई ब्याट्सम्यान र दुई बलर बरियतामा पर्न सफल भएका हुन् । नयाँ बरियता नेपालका ब्याट्सम्यान कप्तान पारस खड्का र शरद भेषवाकर तथा बलरहरू सोमपाल कामी र वसन्त रेग्मी पर्न सफल भएका हुन् । ब्याटिङतर्फ कप्तान पारस खड्का ९४औँ र शरद १००औँ स्थानमा छन् । त्यस्तै बलिङतर्फ सोमपाल ९२औँ र रेग्मी ७४औँ स्थानमा छन् । आइसिसीले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा खेलाडीको प्रदर्शनका आधारमा बरियता निर्धारण गर्छ । एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पाएसँगै नेपाली खेलाडी पनि यसै वर्षदेखि बरियतामा समावेश हुँदै आएका छन् । यो पनि पढौ किन बस्ने भगवान महादेवको ब्रत सोमबार ? यस्तो छ कारण ! एकजना असाध्यै धनवान व्यापारी थियो, उसको घरम
साफ यू–१५ मा नेपाल– बङ्गलादेश भिड्दै
काठमाडौँ, १२ कात्तिक । साफ यू–१५ च्याम्पियनसिप फुटबल प्रतियोगितामा आज नेपाल र बङ्गलादेशबीच खेल हुँदैछ । ललितपुरस्थित एन्फा कम्प्लेक्स सातदोबाटोमा नेपाल र बङ्गलादेशबीचको खेल दिउँसो २ः३० मा शुरु हुने अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ (एन्फा)ले जनाएको छ । नेपाल र बङ्गलादेश यसअघिको एक एक खेल जित्दै सेमिफाइनल प्रवेश गरिसकेका छन् । आजको विजेता समूह विजेता बन्दै सेमिफाइलन पुग्नेछ । नेपालले आफ्नो पहिलो खेलमा माल्दिभ्सलाई ४–० गोलले पराजित गरेको थियो भने बङ्गलादेशले पनि आफ्नो पहिलो खेलमा माल्दिभ्सलाई ९–० गोलले पराजित गरेको थियो । समूह ‘बी’ अन्तर्गतको अन्तिम खेलमा आज भारतले भुटानसँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ । यो समूहबाट पाकिस्तान समूह विजेता बन्दै सेमिफाइनल पुगिसेकको छ । प्रतियोगितामा नेपाल, भारत, पाकिस्तान, भुटान, माल्दिभ्स र बङ्गलादेशले सहभागिता जनाउँदैछन् । प्रतियोगिताका सबै खेल एन्फा मैदान सातदोबाटोमा हु
साफ यू–१५ फुटबल ः पाकिस्तान सेमिफाइनल प्रवेश
काठमाडौँ – पाकिस्तान साफ यू–१५ च्याम्पियनसिप फुटबल प्रतियोगिताको सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ । प्रतियोगितामा लगातार दोस्रो जित निकाल्दै पाकिस्तानले अन्तिम चारमा स्थान बनाएको हो । समूह चरणको दोस्रो खेलमा पाकिस्तानले आज भूटानलाई ४–० गोल अन्तरले पराजित गर्दै सेमिफाइनल पुगेको हो । ललितपुरको सातदोबाटोस्थित एन्फा कम्प्लेक्समा भएका खेलमा खेलको २४ औँ मिनेटमा मुद्दसर नजरले गोल गर्दै पाकिस्तालाई शुरुआती अग्रता दिलाएका थिए । त्यसको तीन मिनेटपछि इफ्तिखर अहमेदले पाकिस्तानको अग्रता दोब्बर पारे । ३३ औँ मिनेटमा मोइन अहमेदले तेस्रो गोल थपे । पहिलो हाफको अन्तिम समयमा मोइनले व्यक्तिगत दोस्रो गोल गर्दै पाकिस्तानलाई फराकिलो जित दिलाए । पहिलो हाफमा चार गोल खाएको भूटान दोस्रो हाफमा खेलमा फर्किन सकेन । पहिलो हाफको तुलनामा सुधारिएको प्रदर्शन गरे पनि भूटानले गोल गर्न सकेन । पहिलो खेलमा पाकिस्तानले बलियो